KhabarSamachar | कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने सहमति
२०७८ कार्तिक ९, मंगलवार १९:२६
नेपाली कांग्रेसको १४‍औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि सार्ने सहमति बनेको छ।
आज सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको बैठकमा सभापति देउवाले मंसिरभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउन निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरेका हुन्।
निर्वाचन समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मंसिर ९ देखि १३ गतेको अवधिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने बताए । निर्वाचन समितिले पार्टीले निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेको गुनासो गरेको थियो ।
सभापति देउवाले मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ सम्म गर्ने भनेको छ। तर कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। सभापति देउवाले मंसिरभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए।
महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न आफूले माग गरेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए। कांग्रेसले १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै गरेको छैन भने १३ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन नै सकिइसकेको छ।
‘मैले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गरेको छु, सभापतिजीले बोलाउनुहोला,’ बैठकपछि पौडेलले पत्रकारहरूसँग भने, ‘पहिले बनेको कार्यतालिकालाई ध्यानमा राखेर कसरी छिटो अधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ भनेका छौं।’
‘पार्टी सभापतिले स्पष्ट रुपमा निर्वाचन समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार छ । तपाईंहरुले यो प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउनुहोस् । र मंसिरभित्र महाधिवेशन गरी सक्नुपर्छ । त्यसकारण यो तलदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन जुन छ, यो मंसिरभित्र हुनुपर्छ । र त्यही अनुरुप तपाईंहरुले कार्यतालिका लागि होमवर्क गर्नुस् भनेर सभापतिले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ’ डा. महतले भने ।
निर्वाचन समितिका सदस्य घिमिरेले पार्टीले सहयोग गरेमा मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने भन्दै आफूहरुले दुई दिनमा नयाँ कार्यतालिका ल्याउने बताए ।
छलफलका क्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले मंसिर ९ देखि १३ गतेकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर निर्वाचन समितिले सो समितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने बताएको छ । कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन पनि नभएको अवस्थामा अबको एक महिनाको अवधिमा सबै महाधिवेशन गर्न नसकिने निर्वाचन समितिले बताएको छ ।
त्यसपछि पौडेलले महाधिवेशन मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले महाधिवेशन तयारीका लागि पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुपर्ने बताए।